Aubrey O'Day akambodanana naDonald Trump Jr.? - Nhau
Kuru Macelebs Blog Style Varaidzo
Aubrey O'Day akambodanana naDonald Trump Jr.?
Aubrey O'Day anga achidanana naDonald Trump Jr. makore matanhatu apfuura, maererano nemishumo miviri inonakidza.
Musi waMarch 19, blogger Perez Hilton yakaburitsa nyaya yebhomba ichiti mwanakomana wemutungamiri wenyika aive nehukama nemuimbi uye chaiye hunhu hweTV mushure mekunge aonekwa pa'The Celebrity Apprentice 'muna 2012. Aubrey, Perez anoti, akangopinda muhukama nekuti Don Jr. akange amuudza kuti iye na mukadzi wake vaiparadzana.
Vhiki rapfuura, mudzimai waDon Jr., Vanessa Trump, akamhan'arira kurambana mushure memakore gumi nematanhatu ekuroora.
amelia heinle uye thad luckinbill dzoka pamwe chete
'Don Jr. aive nehasha, achitevera [Aubrey], achimuudza kuti anomuda uye kuti anoda kuva naye,' akadaro munhu akaudza blogger.
Iyo nyaya inoti Don naVanessa vakapotsa vapatsanurwa makore apfuura nekuda kweaimbove Danity Kane muimbi.
Maawa mashoma mushure mekunge nyaya yaPerez yarova Internet, iyo New York Post yakaburitsa mushumo wakafanana. Vanonzi vePost vanotaura kuti Vanessa akarwadziwa Don paakamuudza kuti akaronga kumusiya kuna Aubrey.
Vanessa aive nepamuviri nemwana wavo wechina, Tristan, panguva iyoyo.
'Ini ndinofunga kuroora kwake naVanessa kwakange kwapera kare Aubrey asati auya,' sosi yakaudza Peji Yechitanhatu, ichiwedzera kuti mhuri yaDon Jr yakamumanikidza kuti agare mumuchato Muchokwadi, imwe sosi yakati Mutungamiri Donald Trump akaudza mwanakomana wake kuti 'agogodza.'
jesse james decker akashama pics
The Post rakapomera kuti Aubrey ainyatsodanana naDon Jr., uye akarohwa naye.
Sezvineiwo, husiku hwesarudzo 2016, Aubrey akatumira tweet, 'Ndiri kunyara kuve muAmerican.' Mushure mekunge mumwe munhu ataura kuti aive pachiratidziro chaTrump cheTV, akati, 'Kwete. nyaya yangu yandisina kutaura yakakosha mamirioni izvozvi… izvi hazvindikuvadze, zvinokuvadza America. '
Danny Amendola anonyora, anobvisa imwe Instagram chinyorwa nezve ex Olivia Culpo
Kate Bosworth akapika kufambidzana nevatambi mushure me '00s Orlando Bloom kudanana
blake shelton akanyengedza pamiranda
wendy williams murume kevin muvhimi basa
ko mariah carey ring yaidhura zvakadii
chii chakaitika kuna catt sadler
gayle mambo uye 50 muzana akaroora
donald trump wekutanga mutungamiri wechikadzi
katharine mcphee na david foster